आजबाट श्री लालीगुराँस २२औं वर्षमा, संस्थाले शुरु गर्यो ए.टि.एम्. सेवा « News of Nepal
आजबाट श्री लालीगुराँस २२औं वर्षमा, संस्थाले शुरु गर्यो ए.टि.एम्. सेवा
श्री लालीगुरास सहकारी संस्था लिमिटेडले एटिएम सेवा शुरु गरेको छ । पुल्चोक स्थित मुख्य कार्यालयमा सो सेवा शुरु गरेको हो । एटिएम बुथको उद्घाटन संस्थाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । संस्थाको २२ औ स्थापना दिवसको अवसरमा एटिएम सेवा शुरु गरेको हो।
संस्थामा हाल २१ हजार शेयर सदस्य छन् । साथै ३ सय भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । २०५६ साल भदौ १८ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भई असोज १५ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ललितपुरको ताल्छिलेखमा लालीगुराँस हस्पिटल प्रा.लि., शिक्षाक्षेत्र तर्फ काठमाण्डौंको नयाँ बानेश्वरमा लालीगुराँस राष्ट्रिय मा.वि.÷कलेज प्रा.लि., डेरी परियोजना तर्फ चितवनको खैरहनीमा श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर, उर्जा क्षेत्रतर्फ सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा भैरवकुण्ड हाईड्रोपावर लि. लगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुमा लगानी गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा नख्खु बजार क्षेत्रमा क्यूआर कोड
बागमती प्रदेशमा श्रम बजार परियोजना
नेप्सेमा दोहोरो रेकर्ड
छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा